Nohon’ny Famoahana ‘Tsiambaratelom-Panjakana’, Nogadrain’i Shina i Gao Yu, Mpanao Gazety Malaza · Global Voices teny Malagasy
Nohon'ny Famoahana ‘Tsiambaratelom-Panjakana’, Nogadrain'i Shina i Gao Yu, Mpanao Gazety Malaza
Voadika ny 03 Mey 2015 11:12 GMT
Gao Yu. Sary tao amin'ny Wikipedia Commons.
Ny 17 aprily, nomelohan'ny Fitsarana ao Beijing 7 taona an-tranomaizina i Gao Yu, Shinoa mpanao gazety efa za-draharaha, nohon'ny “nanomezany tsy ara-dàlana tsiambaratelom-panjakana ho an'ny Vahiny”.
Satria ny fitsarana tsy namaritra mazava ny zavatra navoakany, mino ny mpanara-baovao ao Shina fa ireo heverina ho ” tsiambaratelom-panjakana” dia baiko avy amin'ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP), fantatra amin'ny anarana hoe Antontan-taratasy laharana faha 9, mikasika ny ady ideolojika ataony amin'ny soatoavina tandrefana. Mifandraika manokana amin'ny lafin-javatra fito izany (fantatra amin'ny anarana hoe “zavatra fito tsy azo resahana”) “) izay tsy tokony ho ampianarin'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite :ny soatoavina iraisan'izao tontolo izao, fahalalahana amin'ny fanaovana gazety, fiarahamonina sivily, zon'olombelona, ny hadisoana teo aloha nataon'ny antoko kaominista, kapitalisma kiantranoantrano ary ny fahaleovantenan'ny fitsarana.
Tamin'ny 1980 no nanombohan'i Gao Yu ny asa fanaovan-gazety. Nigadra nihoatran'ny iray taona izy taorian'ny fanoherana mandala ny demokrasia tao Tiananmen tamin'ny 1989, nohon'ny fanohanana ny hetsika tao anatin'ny tatitra nataony. Nigadra indray izy nandritry ny enina taona, teo anelanelan'ny 1993 sy 1999, nohon'ny famoahana tsiambaratelom-panjakana.
Tamin'ity fanenjehana faramparany ity, ilay mpanao gazety 71 taona dia nogadraina tamin'ny Aprily 2014 ary noterena “hiaiky” tao amin'ny Fahitalavi-panjakana Shinoa ho nanao “hadisoana goavana”, taorian'ny nitazonan'ny polisy ny zanany lahy.
Tohina tamin'ny vaovao momba ny nanamelohana an'i Gao Yu ny fikambanan'ny Shinoa any ampitan-dranomasina. Ny firaisan'i Hong Kong Manohana ny Hetsika Demokratika Tia Tanindrazana any Shina, izay fitambaran'ny O.N.G. niorina taorian'ny vono olona mahatsiravina tao Tiananmen tamin'ny 1989, dia naneho fanoherana teo ivelan'ny Birao Fifandraisan'ny Governemanta Foiben'ny Vahoaka tao Hong Kong, mangataka ny hamotsorana azy tsy misy hatakandro.
Ny Firaisan'i Hong Kong Manohana Ny Hetsika Demokratika Tia Tanindrazana any Shina, dia naneho fanoherana teo ivelan'ny Birao Fifandraisan'ny Governemanta Foiben'ny Vahoaka tao Hong Kong, mangataka ny hamotsorana azy tsy misy hatakandro. Sary avy amin'ny mpampiasa Twitter @HKfighter
Nanazava tao amin'ny “Twitter” i Hu Jia, mpanohitra ara-politika izay eo ambany fanaraha-mason'ny polisy ao Beijing, ny antony nahatonga an'i Gao Yu nahazo izany didim-pitsarana henjana izany tamin'ny fanaovana ny asany amin'ny maha mpanao gazety azy :
Ny “zavatra fito tsy azo resahana” dia nampiseho ny lafy ratsin'ny CCP. Ny marimarina kokoa, mamaritra mazava ny fitondrana jadona ataon'i Xi Jinping [Filoha Shinoa ankehitriny]. I Shina no firenena ahitana hoe midika fanagadrana ny fanehoana ny haratsian'ny fitondrana. Ny raharaha Gao Yu dia mampiharihary amin'izao tontolo izao ny fandehanan'ny CCP mifanohitra amin'ny soatoavina iraisan'izao tontolo izao.
Nanamarina i Wu Zuolai, mpamakafaka ny raharaha andavanandro, fa ny antontan-taratasin'ny antoko kaominista dia tsy tokony ho raisina ho toy ny antontan-taratasim-panjakana :
Mahamenatra ny fanamelohana fito taona an-tranomaizina mpanao gazety efa 71 taona. Inona no karazana tsiambaratelom-panjakana navoakan'i Gao Yu ? Ny “zavatra fito tsy azo resahana” dia tokony ho antontan-taratasy famakin'ny daholobe. Nizara ny antontan-taratasin'ny antoko ihany no nataon'i ranabavy Gao. Toy ny antoko mitondra, ny antontan-taratasy dia fananan'ny antoko, inona no maha tsiambaratelom-panjakana an'izany ? Tsy mahamenatra ve izany ? Raha niteraka fanoherana iraisam-pirenena ny zava-nitranga, ny fitondrana vaovao ihany no manome laza ratsy ho an'ny tenany.
Nino i Wang Dang, mpitarika ny hetsiky ny demokrasia tamin'ny 1989 tao Tiananmen, fa izao raharaha izao dia ho lasa lakolosy fanairana ho an'ireo izay mbola manana fanantenana amin'ny fitondrana vaovao ao Shina tantanin'i Xi :
Manohy mandoka ny politikan'i Xi JinPing ho toy ny “fanavaozana” ny olona sasany. Mampiseho ny tena endrik'i “Shina mandroso” [ny raharaha Gao]. Ny asan'ilay ambara hoe “antoko matoky tena” – mandrara ny resaka rehetra momba ny lalampanorenana, tsy mamela ny olona hahalala ny zavatra norarany. Tena mahatsikaiky, tena mahamenatra ary tena mahatsiravina.
Manambara amintsika ny zava-misy : na dia taorian'ny niakaran'i Xi Jinping teo amin'ny fitondrana aza, mbola nitotongana hatrany ny CCP amin'ny fanavaozana politika ataony ary lasa mivatravatra amin'ny fampijaliana ataony amin'ny fanoherana. Raha mbola eo amin'ny fitondrana i Xi, ho fotoana maloka ho an'ny zon'olombelona izany.
Ny fanantenana rehetra ho an'ny fitondrana tsy refesi-mandidy ataon'i Xi dia mifototra amin'ny tsy fahalalàn'izy ireo ny politikan'ny “princelings“, XI Jinping sy i Shina. Nampiasa ny fahalalàhany i Gao Yu mba hilazana amintsika izany zava-misy izany. Raha mbola tsy mahita izany ianareo ary manantena ny hitondran'i Xi ny fanavaozana ara-politika, dia na ianareo adala na ianareo dondrona.
8 ora izayJapana